कुर्ता लगाएकी आईमाईले मलाई बोलाउँदै थिईन् – भाग २ - Wonder Ideas
कुर्ता लगाएकी आईमाईले मलाई बोलाउँदै थिईन् – भाग २
त्यसपछी सानीभाउजु ले मलाई “भुट्या मकै खान्छस् त ?” भनेर सोध्नुभयो, मैले पनि हुन्छ भनें । सानीभाउजु फेरी भित्र भान्सामा छिर्नुभयो र भान्साबाट मकै भुटेको आवाज आउन थाल्यो । म भुटेको मकैसँग कालो चिया पिउँदै थिएं, भाउजु मुस्काउँदै आउनुभयो । मैले चिया र मकै छोडेर भाउजु लाई अँगालेर आफ्नो छेउमै बसाएँ । छिनमै सानीभाउजु ले भाउजु
लाई पनि मकै र चिया ल्याईदिनुभयो, चिया र मकै सानीभाउजु को हातबाट लिँदै भाउजु ले भन्नुभयो “यसलाई त बोलाउनु मात्रै भयो, आज सबैले मानेर मेरो नाममा नामसारी पनि गर्दिसके ! अब आई त हालिस् केही दिन आफ्नो पुर्ख्यौली घुमेर जालास् नि त ?” केहीबेरमा खाजा खाएर सकेपछी भाउजु ले मेरो हात समाएर आँगनमा पुर्*याउँदै भन्नुभयो “ल हिँड म तलाईं तेरो सम्पत्ति देखाउँछु ।“ अनि भाउजु र म त्यहाँबाट आफ्नो खेतबारी हेर्न भनेर लाग्यौं । निकै पर पुगेर अलिक ओरालो लागेपछी एउटा रुखको फेदमा पुगेर भाउजु ले हातको चोर औंलाले हाम्रो खेतबारीको सिमाना ईशारा गर्नुभयो, मैले पनि प्रत्युत्तरमा निकै पो रैछ भन्दै चारैतिर घुमेर हेरें, वरपर कोही छैन भन्ने आश्वस्त भएपछी मैले भाउजु को हात समातेर च्याप्प आफ्नो अँगालोमा तानें अनि भाउजु को ओंठमा चुम्बन लिएर भाउजु को दुवै बुब्सलाई कपडा माथीबाटै हत्केलामा लिएर निचोर्दै भनें “मेरो सम्पत्ति त यही हो !”
अनि भाउजु को ब्लाउजको हुक खोल्न थालें, भाउजु ले रोक्न खोज्दाखोज्दै मैले भाउजु को ब्लाउजको सबै हुक खोलिभ्याएर ब्राभित्र हात छिराएर भाउजु को नरम नरम बुब्सलाई खेलाउन सुरु गरें अनि भाउजु को मुखमा मुख जोडेर टङ्ग किस पनि दिएँ । जब मैले भाउजु को ब्रालाई माथी सारेर बुब्सलाई खुला गर्ने कोशिस गरें, भाउजु ले मलाई छातीमा हातले धक्का दिएर आफूबाट छुट्याउनुभयो र कपडा मिलाउँदै भन्नुभयो “काठमाण्डु पुगेर गर्लास् जे गरेपनि ? काम छैन – ठाउँ न कुठाउँ सुरु हुन्छ जाँठा !” भाउजु ले कपडा मिलाईसक्दा तल्लो गाउँका केहि मानिस हाम्रो नजदिकै आईपुगे, उनीहरुले नसोध्दै भाउजु ले उनीहरुलाई स्पष्टिकरण दिदैं भन्नुभयो “छोरोलाई जग्गा चिनाउन ल्याको !” उनीहरुले पनि सामान्य प्रतिकृया दिदैं आफ्नो बाटो लागे, धन्नै
देखेनन् नत्र बेईज्जतै हुन्थ्यो हाम्रो । मैले भाउजु लाई फेरी अँगालेर भनें “बुढीमाउ ! हजुरलाई ऊ त्यहाँ झाडीपछाडी लगेर चिक्ने बिचार थियो नि मेरो !” अनि बाटोबाट भाउजु लाई झार्ने कोशिस गरें भाउजु कसोकसो गरि मसँगबाट छुट्टिएर मास्तीर लाग्नुभयो, म पनि भाउजु को पछिपछी लागें । मैले पनि भाउजु लाई त्यति जोड गरिन किनकी अघिल्लो दिन रातीदेखि बसभित्रै र दिउँसोसम्म विकेशको भाउजु लाई चिकेकोले त्यस्तो जरुरत परेको थिएन । सानीभाउजु को घर पुग्दा उहाँले खाना बसालिसक्नुभएको थियो, म पिढीमै बसिरहें, केहिबेरमा भाउजु ले कपडा चेञ्ज गरेर आउनुभयो । भाउजु को शरिरमा यतिखेर म्याक्सी थियो, त्यो कपडामा भाउजु ले पेन्टी नलगाउनुभएको प्रष्ट थाहा हुन्थ्यो भने भाउजु ले ब्रा-चाँही लगाउनुभएको थियो । भाउजु भित्र भान्सामा गएर सानीभाउजु लाई सघाउन थाल्नुभयो, म बहिनीसँग जिस्कदैँ खेल्दै बाहिरै बसिरहें । मलाई रातीको व्यवस्थाले पिरोलीरहेको थियो, खाना खाईवरी सानीभाउजु र भाउजु मिलेर घर-धन्दा सक्नुभयो, बहिनी हजुरभाउजु को काखमा सुतिसकेकी थिई ।
भाउजु मेरो छेउमा आएर बाहिर बस्नुभयो, मैले भाउजु लाई अँगालेर आफ्नो शरिरसँग टाँस्दै काननेर किस गरें अनि एउटा हातलाई मेरो पेन्टमाथी ल्याएर लाँडोलाई थमाउँदै भाउजु को कानमा गएर फुसफुसाउँदै भनें “भाउजु ! आज यसलाई राम्ररी पार्किङ्ग गर्ने व्यवस्था मिलाउनुस् है !” भाउजु ले मेरो लाँडोलाई निमोठ्दै भन्नुभयो, यहाँ तैले खोजेजस्तो सजिलो कहाँ छ र ? त्यसमाथी तेरो सानाबा बाहिर छन् घर त निकै सानो पो लाग्छ मलाई त ?” मैले भाउजु को कानलाई हल्कासँग दाँतले टोकेजस्तो गरें र भनें “बरु अघि बारीतिरै ठोक्नुपर्ने रै’छ… बेकार ! तपाईंले गर्दा त हो !” भाउजु ले सानीभाउजु लाई आवाज दिनुभयो “प्रमीना !” सानीभाउजु ले उत्तर फर्काउनुभयो “हजुर दिदी ! के भयो ?” “के
गर्न थालिस् हौ… अब सुत्ने व्यवस्था मिलाउने हैन ?” “त्यही मिलाउँदै थिए दिदी… तयार भयो ! घर सानो छ अनि साँघुरो पनि छ अब घञ्चो-मञ्चो-सञ्चोमै काम चलाउनु पर्ला… ह्वाँ काठमाण्डुमा त्यत्रो ततेरी नसक्नुको घरमा बसेको बानी के पो निद्रा लाग्ला र यो महेन्द्रलाई ?” मैले सानीभाउजु लाई आश्वस्त पार्नका लागि भनें “सानीभाउजु पनि ! मलाई त यसो पल्टिन पाए मात्रै पुग्छ !” केहिबेरमा सानीभाउजु ले भाउजु लाई भित्र बोलाउनुभयो बिस्तरा देखाउँदै भन्नुभयो “हजुर र म यता सुतौं ! महेन्द्र उतापट्टी सुते हुन्न र ?” भुईंमा एकातिर दुईजनालाई टुपुक्क पर्ने बिस्तरा र अर्कोतिर पनि दुईजना टुपुक्क पर्ने बिस्तरा लगाउनुभएको रहेछ । भाउजु ले सानीभाउजु लाई गाली झैं गर्दै भन्नुभयो “रै’छ तेरो ढङ्ग पनि (अनि झुकेर दुवै विस्तरा जोड्नुभयो)… ल ! तँ छोरी लिएर एक छेउमा सुत् म बिचमा सुत्छु र महेन्द्र यतापट्टी छेउमा सुत्छ… (भाउजु ले हात पछाडी ल्याएर सानीभाउजु ले नदेख्ने गरी मेरो लाँडोलाई थपथपाउँदै) कि हुँदैन महेन्द्र तँलाई ?”
म भएको कोठा भित्र पो आउनुभयो र ढोका लगाउनु भयो
यसरी मैले रातिको दृश्य हेर्नको लागि व्यवस्था मिलाएँ
उद्योगपतिको छोरीसँग भेट हुन अवसर दिलायो